Jurgen Klopp Oo War Xun Ka Sheegay Xaalada Xherdan Shaqiri Iyo Xidig Mustaqbalkiisa Reds Shaki Ku Jiro Oo Maanta Soo Laabtay. - Gool24.Net
Jurgen Klopp Oo War Xun Ka Sheegay Xaalada Xherdan Shaqiri Iyo Xidig Mustaqbalkiisa Reds Shaki Ku Jiro Oo Maanta Soo Laabtay.
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa xaqiijiyay in xidiga kooxdiisa ee Xherdan Shaqiri uu muddo dhaawac ku maqnaan doono kadib natiijada baadhitaankii dhawaan lagu sameeyay xidiga reer Switzerland.
Jurgen Klopp ayaa cadeeyay in Xherdan Shaqiri uu muddo garoomada dhaawac kaga maqnaan doono taas oo dhibaato ku noqonaysa diyaar garowgiisa xili ciyaareedka cusub.
Tababare Jurgen Klopp oo ka warbixinaya xaalada Shaqiri ayaa yidhi: “Shaqiri waxa uu wali la dhaawacan yahay kii uu kooxda xulkiisa kala soo laabtay isla amrkaana waqti ayay ku qaadanaysaa ilaa intuu isagu markale soo laabanayo”.
Klopp oo ka hadlaya nooca dhaawaca uu Shaqiri la sii maqnaan doono ayaa yidhi: “Isaga kubka ayaa dilaacsan, sidaa daraadeed, ilaa muddo waqti ah kuma lug lahaan doono”.
Laakiin Jurgen Klopp ayaa maanta kooxdiisa dib ugu soo dhaweeyay difaaca mustaqbalkiisa Reds shakiga la galinayo ee Dejan Lovern kaas oo lala xidhiidhinayo kooxda AC Milan.
Laakiin Lovern oo si wayn u jecel kooxdiisa Liverpool ayaan doonayn in uu Anfield ka baxo iyada oo waliba guushii Champions league ay ku sii dhiiro galisay in uu Reds waqti badan la sii qaato.
Lovern ayaa ka mid ahaa ciyaartoyda Liverpool aan hore uga soo xaadirin Melwood laakiin maanta waxa uu soo dhawayn fiican ka helay ciyaartoyda iyo shaqaalaha tababarka kooxdiisa Reds ee ay kala maqnaayeen tan iyo guushii Champions league wixii ka danbeeyay.
Inkasta oo la sheegay in Klopp aanu doonayn in Lovern uu xagaagan ka baxo kooxdiisa, haddana wali xidiga reer Croatia ayaa lala xidhiidhinayaa kooxda AC Milan.
Klopp ayaa wali sugaya in ay ciyaartoy kale oo kooxdiisa Liverpool ahi soo laabtaan sida Van Dijk, Wijnaldium halka Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino iyo Alisson ay fasax dheeraad ah u baahan doonaan maadaama oo ay ka qayb galeen Copa America iyo koobka qaramada Afrika.
Liverpool ayaa isku diyaarinaysa kulamada saaxiibtinimo ee xili ciyaareedka ka horeeya iyada oo Reds xili ciyaareedka ku bilaaban doonta finalka Community Shield ee ay Wembley Stadium kula ciyaari doonaan Man City.